MTS in Mpg - Sida loo rogo ama MTS in Mpg / MPEG
> Resource > Beddelaan > Sida loo rogo ama MTS in Mpg / MPEG
Guud ahaan, waxaan heli AVCHD.mts files ka fiidiyo brand, sida Canon, Sony, Panasonic, JVC, iwm, laakiin waa mid aad u xanibayo mar walba nagu ah in aan u ciyaaro, edit, Upload, iyo xataa dajiyaan files, iyagoo ma noqon karaan si weyn loo socon qalabka multimedia kala duwan.
Inkasta oo dhab ahaantii, waxaa jira hab naga caawiyay in ay soo gaaraan. Waxa aynu u baahan yahay MTS in Mpg Video Converter , ama MTS in MPEG Converter si loogu badalo MTS in Mpg / MPEG, ka dibna waxaan si fudud u ciyaari karaa, edit, Upload, iyo dajiyaan faylasha. Hadda, download MTS in Mpg / MPEG Converter, rakibi oo aan bilowno on your computer.
Tallaabada 1. Ku dar files MTS
Riix ah "Add Files" button image ku darto files MTS, ama uun jiidi & hoos u files in ay liiska faylka. Waxaad ku dari kartaa multi-files waqti in la sameeyo beddelaad Dufcaddii.
Aad Videos Tallaabada 2. Edit (Ikhtiyaar)
Ka hor inta badalo MTS video in Mpg ama MPEG, aad edit karaa in la sameeyo video ah qofka oo kaamil ah u raaxaysan iyo wadaagaan.
Riix ah "Edit" button, waxaad noola video ah, ku dar saamayn, watermark, iyo Cinwaan si ay u abuuraan video ah kartoo.
Waxa kale oo aad sameyn kartaa laga bilaabo waqtiga iyo soo afjaridda waqti ay ku doortaan qaybaha aad jeceshahay ee video ah oo ay lafdheerta shaqo. Haddii ay jiraan dad badan oo video clips, wada iyaga oo aad ku milmaan karaa markii diinta.
Tallaabada 3. Set saarka sida Mpg / MPEG
Markaas riix "Qaabka Output" button image inaad doorato qaabka saxda ah. Raadi "Qaabka"> "Video"> "Mpg", ama waxaad dooran kartaa qaab kale ah in ay la kulmaan aad looga baahan yahay.
Hadda waxaad riixi kartaa ah "Beddelaan" si loogu badalo MTS in MPEG / Mpg. Tani Converter Video idin ​​tusin doonaa markii ugu wada baabbe'een oo ay ka harsan guddi qaab beddelidda. Waxaad xaq u leeyihiin inay yara si ay u joojiyaan habka haddii aad rabto. Markii diinta waxay ku xiran tahay tirada video aad diinta.
MTS Import in Adobe jilitaankii : doonayaa inaan badalo MTS si aad u Adobe Premier aan khasaaro tayo leh? Ka fiirso halkan sameeyo.
Iska yaree MTS Files : Haddii ay jiraan goobaha qaar ka mid ah ama qaybaha aad dissatisfy in files MTS, waxaad baran kartaa sida loo gooyay files MTS in qaybaha aad loo jecel yahay halkan.